ယူကရိန္းဘက္က တန္ျပန္ထိုးစစ္စၿပီလား. . . ( Chuhuiv ၿမိဳ႕ကို ယူကရိန္းက ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႐ုရွားတပ္မႉးႏွစ္ဦးေသဆုံးလို႔ ယူကရိန္းစစ္ဦးစီခ်ဳပ္႐ုံးက ေၾကညာ )
ယူကရိန်းဘက်က တန်ပြန်ထိုးစစ်စပြီလား. . . ( Chuhuiv မြို့ကို ယူကရိန်းက ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ရုရှားတပ်မှူးနှစ်ဦးသေဆုံးလို့ ယူကရိန်းစစ်ဦးစီချုပ်ရုံးက ကြေညာ )
Chuhuiv မြို့ကို ယူကရိန်းက ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ရုရှားတပ်မှူးနှစ်ဦးသေဆုံးလို့ ယူကရိန်းစစ်ဦးစီချုပ်ရုံးက ကြေညာ ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာ နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Chuhuiv ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ယူကရိန်းအရာရှိတွေက ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ မြို့တော်ကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာမှာ ပူတင်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ လူတွေနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေမှာ
ကြီးမားတဲ့ဆုံံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်း စစ်ဦးစီးချုပ်ရုံးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာ ရုရှားတပ်မှူးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ Kharkiv မြို့နဲ့ ၂၃ မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပြီး လူဦးရေးသုံးသောင်းခန့်နေထိုင်တဲ့ အဆိုပါမြို့ဟာ ဗျူဟာကျတဲ့မြို့တခုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ဖော်ပြမှုအရဆိုရင်တော့ “ရန်လိုမှုတွေအတွင်းကနေ Chuhuiv မြို့ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါပြီ၊ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားသူတွေရဲ့
တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ စက်ကိရိယာအတွက် အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်” လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ရုရှားတပ်မတော်ရဲ့ အမှတ် ၆၁ သီးခြားမရိန်းတပ်မဟာမှူး၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး Dmitry Safronov နဲ့ ရုရှားတပ်မတော် အမှတ် ၁၁ လေကြောင်းချီတပ်ဖွဲ့က ဒုဗိုလ်မှူးကြီး Denis Glebov တို့ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ စစ်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီး မြို့တော်ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ပစ်ခတ်မှုဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ဗုံးဒဏ်ထိမှန်ခဲ့တဲ့
မြို့နေ အသက် ၅၂ အရွယ် အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံက လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုအခါမှာ ယူကရိန်းက ရုရှားကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကာ စစ်ပွဲ ၁၂ ရက်မြောက်နေ့မှာ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေကို မြို့ကြီးတွေမှာ
ရုရှားက ပြုလုပ်နေချိန် ဒီသတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရုရှားဘက်က ထုတ်ပြန်တာမျိုးတော့မရှိသေးဘဲ ယူကရိန်းဘက်ကသာ ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
crd-The River News
ယူကရိနျးဘကျက တနျပွနျထိုးစစျစပွီလား. . . ( Chuhuiv မွို့ကို ယူကရိနျးက ပွနျလညျသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပွီး ရုရှားတပျမှူးနှစျဦးသဆေုံးလို့ ယူကရိနျးစစျဦးစီခြုပျရုံးက ကွညော )
Chuhuiv မွို့ကို ယူကရိနျးက ပွနျလညျသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပွီး ရုရှားတပျမှူးနှစျဦးသဆေုံးလို့ ယူကရိနျးစစျဦးစီခြုပျရုံးက ကွညော ယူကရိနျးတပျဖှဲ့တှဟော နိုငျငံအရှေ့ပိုငျးမွို့ဖွစျတဲ့ Chuhuiv ကို ပွနျလညျသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ပွီလို့ ယူကရိနျးအရာရှိတှကေ ကွညောလိုကျပါတယျ။ ကာကှယျရေးတပျဖှဲ့တှဟော ရုရှားသိမျးပိုကျထားတဲ့ မွို့တောျကို ပွနျလညျသိမျးပိုကျခဲ့ရာမှာ ပူတငျအနနေဲ့ သူ့ရဲ့ လူတှနေဲ့ ပစ်စညျးကိရိယာတှမှော
ကွီးမားတဲ့ဆုံံးရှုံးမှုတှရှေိခဲ့တယျလို့လညျး စစျဦးစီးခြုပျရုံးက ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို ပွနျလညျတိုကျခိုကျသိမျးပိုကျမှုမှာ ရုရှားတပျမှူးနှစျဦးသဆေုံးခဲ့တယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။ Kharkiv မွို့နဲ့ ၂၃ မိုငျအကှာမှာတညျရှိပွီး လူဦးရေးသုံးသောငျးခနျ့နထေိုငျတဲ့ အဆိုပါမွို့ဟာ ဗြူဟာကတြဲ့မွို့တခုဖွစျပါတယျ။ စစျဦးစီးခြုပျရုံးရဲ့ ဖေ့ဘှတျချမှာ ဖောျပွမှုအရဆိုရငျတော့ “ရနျလိုမှုတှအေတှငျးကနေ Chuhuiv မွို့ လှတျမွောကျခဲ့ပါပွီ၊ ကြူးကြောျသိမျးပိုကျထားသူတှရေဲ့
တပျဖှဲ့တှနေဲ့ စကျကိရိယာအတှကျ အကွီးအကယြျဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယျ” လို့ တှေ့ရှိရပါတယျ။ ဒီတိုကျပှဲမှာ ရုရှားတပျမတောျရဲ့ အမှတျ ၆၁ သီးခွားမရိနျးတပျမဟာမှူး၊ ဒုတိယဗိုလျမှူးကွီး Dmitry Safronov နဲ့ ရုရှားတပျမတောျ အမှတျ ၁၁ လကွေောငျးခြီတပျဖှဲ့က ဒုဗိုလျမှူးကွီး Denis Glebov တို့ သဆေုံးခဲ့တယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ စစျပှဲစတငျခြိနျကစပွီး မွို့တောျဟာ ပွငျးထနျတဲ့ ပစျခတျမှုဒဏျကို ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီး ဗုံးဒဏျထိမှနျခဲ့တဲ့
မွို့နေ အသကျ ၅၂ အရှယျ အမြိုးသမီးတဦးရဲ့ ဓာတျပုံက လူမှုကှနျရကျပေါျမှာ ပြံ့နှံ့ခဲ့ပါသေးတယျ။ အခုအခါမှာ ယူကရိနျးက ရုရှားကိုတားဆီးနိုငျခဲ့ပွီး မွို့ကိုပွနျလညျရရှိဖို့ တနျပွနျတိုကျခိုကျမှုတှကေိုတောငျ ပွုလုပျနိုငျခဲ့ကာ စစျပှဲ ၁၂ ရကျမွောကျနေ့မှာ ဗုံးကွဲတိုကျခိုကျမှုအသစျတှကေို မွို့ကွီးတှမှော
ရုရှားက ပွုလုပျနခြေိနျ ဒီသတငျးထှကျပေါျခဲ့တာဖွစျပါတယျ။ ဒီသတငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ရုရှားဘကျက ထုတျပွနျတာမြိုးတော့မရှိသေးဘဲ ယူကရိနျးဘကျကသာ ထုတျပွနျထားတာလညျးဖွစျပါတယျ။